कोतपर्वको प्रेतले ऐँठन लगाएका नेताहरू - कोतपर्वको प्रेतले ऐँठन लगाएका नेताहरू
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३० फाल्गुन, 08:17:47 PM
‘ठूला’ पार्टीहरूमा तिलश्मी ढङ्गले तुच्छ कलह मच्चिरहनु अब नियमित आकस्मिकता भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्र पन्पिरहेका कलहहरू सैद्धान्तिक द्वन्द्व होइनन्, न त जनतालाई सुविस्ता दिने होडवाजीका क्रममा पैदा भएका हुन् ।
यी पार्टीभित्र जनताले भोगेका कमी, कठिनाई र आवश्यकताबारे कहिल्यै एजेण्डाका रुपमा छलफल नै भएन । भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न पार्टीहरूमा शुद्धीकरणको लागि निर्ममतापूर्वक देशब्यापी अभियान चलाउनुपर्नेतर्फ कहिल्यै सोचिएन । जङ्गबहादुरको पुनरावृत्तिका होडवाजीमा देखापरेको कोतपर्वको मानसिकताका साथ अन्त्यहिन संघर्ष चलिरहेको छ । कलहले गैरजिम्मेवारी र पतनशिलता नाप्ने डिग्रीको काम गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसजस्तो ठूलो, जेठो र जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी यतिखेर नेतृत्व कब्जाको लागि निर्लज्जतापूर्वक महाभारत मच्चाइरहेको छ । यो यस्तो शक्ति–संघर्ष हो, जसमा शरम र नैतिकता त्यागिएको छ । यसले अराजकतावादी तथा कानुन हातमा लिन खोज्नेको हौसला निकै बढाएको छ भने स्वस्थ राजनीति खोज्ने निष्ठावान् कांग्रेसजनलाई दुःखी र निरास बनाएको छ ।
रामायणको मान्यता छ, राज्यका निम्ति दाजुभाई आपसमा नलड्ने । तर महाभारतको मान्यता हो राज्यका निम्ति दाजुभाई नलडी नछोड्ने । रामायणमा सम्बन्ध जोड्दै जाने र जोडेका सम्बन्धहरूलाई घनिष्ट बनाउँदै जाने प्रयत्न हुन्छ । राम र हनुमानको भेट, हनुमानको भक्ति प्रकट, राम र सुग्रिवको मितेरी, सबरीजस्ती एकल र दलित महिलाको आतिथ्यमा रमाउने राम चरित्र रामायणमा छ । महाभारतमा भइरहेको सम्बन्ध पनि तोडिएर शत्रुतामा परिणत हुन्छ । कौरव र पाण्डव दाजुभाई भएपनि शत्रु भएर लडाई गर्छन् । रामायणमा देवर लक्ष्मण र अन्य भाईहरूले भाउजु सीतालाई आमासरहको सम्मान र सेवा गर्दछन् । महाभारतमा भाउजु द्रौपदीलाई देवर दुर्योधनले आफ्नो राजसभामा घिच्याउँदै ल्याउन दुशासनलाई लगाएर रजश्वला भएकी भाउजुको हुर्मत लिन सारी तान्न लगाउँछन् । आजको शासन चीरहरण गर्ने दुशासन भइरहेको छ
सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्न खोज्दा पनि नेपाली कांग्रेसको झगडा, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’का रित्ता ढ्वाङ्हरूमा को शक्तिशाली हुने अन्धो आकांक्षाबाट लक्षित देखिन्छ । सभापति र वरिष्ठ नेताका दुबैतिर मन्थरावृत्ति गर्नेहरूको कमी छैन । एक्काइसौँ शताब्दीका ‘मन्थराहरू’ हावी हुनाले विग्रहले उग्ररूप लिँदै गएको छ । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल कुनै बिन्दुमा पनि मिल्न नसकुन् भन्ने नियतले मन्थराहरू जब सल्बलाए त्यसपछि न्यानोको लागि देउवा र रामचन्द्रले जोरेको आगोमा जहरिलो घिऊ हाल्न पुगे । यस अतिरिक्त चुनावमा कहिल्यै पनि ‘रूख’मा भोट नदिएर ‘टिन’, ढ््याङ्ग्रो, भ¥याङ्, पुतलीजस्ता चुनाब चिन्हमा भोट हाल्दैआएका ‘कांग्रेस’ अनुहारहरू पनि झगडा चर्काउने कारकका रूपमा देखिएका छन् । कोही कोइरालापट्टी त कोही देउवापट्टी वा पौडेलपट्टी छन् ।
बि.सं. २००४ सालदेखि आजसम्म नेपाली कांग्रेसका आन्तरिक झगडाहरू हेर्दै ल्याऔँ, ती प्रत्येक झगडाका एउटा पक्षमा कोइरालाहरू नै पर्दै आएका छन् र सबैजसो झगडामा कोइराला पक्षकै जीत हुँदै आएको छ । यी झगडामध्ये बीपीले पार्टीमा गर्नुभएको आन्तरिक द्वन्द्वलाई पारिवारिक बर्चश्वका लागि भन्न मिल्दैन । किनकि उहाँ अर्कै खालका नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सरिक हुनुभएको द्वन्द्वमा न्याय स्थापनाको चेष्टा थियो, तुक र तर्क पनि थियो ।
कोठेशक्ति चलाउँदै र ओठेभक्तिमा रमाउँदै आएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबैको साझा सभापति भएर विशाल पार्टी चलाउनु परेको आजको अवस्था नै एउटा समस्या भइदियो । उता ४० प्रतिशत भागबण्डा पाएका पौडेलका लागि पनि सिंगो पार्टीको नेता हुनबाट खुम्चेर मात्र ४० प्रतिशतको नेता हुनपनि हम्मेहम्मे पर्दै आयो ।
वास्तवमा अहिलेका मूख्य दुईजनै नेताले राजनीतिबाट एउटा व्यक्तिले पाउनसक्ने अधिकतम् लाभ लिइसके । देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । फुटेको नेपाली कांग्रेस नै सही, उनी त्योसहित दुईपटक सभापति पनि भइसके र सभापतिकै पदमा बहाल छन् । रामचन्द्र पौडेलपनि मुलुकको सबभन्दा पुरानो र देश–विदेशमा सबभन्दा सुपरिचित प्रमुख दलको वरिष्ठ नेताको रुपमा विराजमान छन् । उनीहरू त एउटा उचाइमा पुगेर जुँगाको लडाई गरिरहेका छन्, यसमा कार्यकर्ताले किन सामेल हुने ? त्यसैले यी झगडियाहरू, झगडाले गर्दा नै कमजोर भए र पार्टीले चुनावमा जनताबाट यथेष्ठ मत पाए पनि यिनीहरूकै कारण पराजित मनस्थितिमा पु¥याइरहेका छन् । तसर्थ मध्यमार्गी र एकतावादीहरू यतिबेला सबभन्दा प्रभावशाली र बलिया देखिएका छन् ।
निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू मूल्य र मान्यताको लागि लड्दछन् । तिनीहरूको लडाई आदर्शले प्रेरित हुन्छ । नेपाली समाज रामायाण र महाभारतका आकाश–पातालको अन्तर र मान्यता बुझेको जनसमुदाय हो । रामायणको मान्यता छ, राज्यका निम्ति दाजुभाई आपसमा नलड्ने । तर महाभारतको मान्यता हो राज्यका निम्ति दाजुभाई नलडी नछोड्ने । रामायणमा सम्बन्ध जोड्दै जाने र जोडेका सम्बन्धहरूलाई घनिष्ट बनाउँदै जाने प्रयत्न हुन्छ । राम र हनुमानको भेट, हनुमानको भक्ति प्रकट, राम र सुग्रिवको मितेरी, सबरीजस्ती एकल र दलित महिलाको आतिथ्यमा रमाउने राम चरित्र रामायणमा छ । महाभारतमा भइरहेको सम्बन्ध पनि तोडिएर शत्रुतामा परिणत हुन्छ । कौरव र पाण्डव दाजुभाई भएपनि शत्रु भएर लडाई गर्छन् । रामायणमा देवर लक्ष्मण र अन्य भाईहरूले भाउजु सीतालाई आमासरहको सम्मान र सेवा गर्दछन् । महाभारतमा भाउजु द्रौपदीलाई देवर दुर्योधनले आफ्नो राजसभामा घिच्याउँदै ल्याउन दुशासनलाई लगाएर रजश्वला भएकी भाउजुको हुर्मत लिन सारी तान्न लगाउँछन् । आजको शासन चीरहरण गर्ने दुशासन भइरहेको छ ।
नेपालको वर्तमान सत्ता राजनीतिमा महाभारतका सम्पूर्ण रहस्य र इन्द्रजालहरू लागु भइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवा महाभारतमा उल्लेखित सात महारथीले बनाएको चक्रब्युहमा एक्लो अभिमन्यु फसेझैं पत्नी र वरिपरि ऐँजेरुझैं पालिएको गिरोहबाट फस्दै जानथाले । परिणामस्वरुप, यिनलाई कसैले पनि देशका लागि इमानदार नेता भन्न सक्दैनन् । इमानदार हुने इच्छै रहेनछ त कसरी इमानदार बनुन् । वास्तविकताको पोल खुलिरहेको छ ।
राजनीति मर्दले कमाइदिने नामर्दले खाने कुरा हो भनिन्छ । ‘मर्दहरू’ ले इतिहास निर्माण गरिदिएको पार्टीका आँगनमा आज नामर्दहरूको रत्यौली चलिरहेको छ । पार्टीको एघारौं महाधिवेशनले ‘राजतन्त्र निरपेक्ष’ बाटो लिएर त्यसै साल माओवादीसँग मितेरी गाँसेको हो बाह्रबुँदे समझ्दारीका रूपमा । राजतन्त्र निरपेक्ष भएर सिद्धान्तच्युत हुनथालेको कांग्रेस अझैसम्म इतिहासले दिएको शिक्षा र अनुभवअनुरूप आपूmलाई सच्याउन तयार देखिन्न ।
आज फुट्नबाट बचेको कुनै पार्टी छैन । सबभन्दा आश्चर्य त कांग्रेसमै छ अहिले । पार्टीको गत बाह«ौं र तेह«ौं महाधिवेशन र पोहोर चलेको जनजागरण अभियानमा त्यस पार्टीप्रति नयाँपुस्ता वा युवा वर्गले देखाएको अत्यधिक समर्थनबाट अन्य पार्टीहरू पनि हच्केका थिए । गत माघ २१ गते एकदिने देशब्यापी जनप्रदर्शनमा कांग्रेसको पक्षमा भएको विशाल उपस्थितिले पनि कांग्रेसको जनाधार र जनशक्तिको राम्रो वास्तविकता देखायो । तर पार्टीका ‘मठाधीश’हरूले चलाएको बाह«मासे झगडाले त्यो जनसमर्थन र विजयलाई मुच्र्छा पर्ने गरी लात हानेको देखा पर्दैछ । जनमत कांग्रेसतिर आकर्षित भइरहेको छ, त्यसका नेताहरू भने कुकुर र बिरालो सरहको झगडा झिकेर जनमतलाई लत्याउने गर्दछन् । जनताले समर्थन गरेको ब्यर्थमा फालेर स्वार्थको झगडाले कांग्रेसलाई थला पार्दैछ ।
कांग्रेस, यी झगडियाले बनाएर बनेको होइन यो पार्टी । यी झगडिया नाइकेहरू आफ्नै विलक्षण विशेषताले होइन, पञ्चायतले नपत्याएर र राजाको शासनले लखेटेको जनताले देखेका भरमा नेता भईखाएका रहेछन् । आज यही तीतो यथार्थ प्रमाणित भइरहेको छ । राजनीति मर्दले कमाइदिने नामर्दले खाने कुरा हो भनिन्छ । ‘मर्दहरू’ ले इतिहास निर्माण गरिदिएको पार्टीका आँगनमा आज नामर्दहरूको रत्यौली चलिरहेको छ । पार्टीको एघारौं महाधिवेशनले ‘राजतन्त्र निरपेक्ष’ बाटो लिएर त्यसै साल माओवादीसँग मितेरी गाँसेको हो बाह्रबुँदे समझ्दारीका रूपमा । राजतन्त्र निरपेक्ष भएर सिद्धान्तच्युत हुनथालेको कांग्रेस अझैसम्म इतिहासले दिएको शिक्षा र अनुभवअनुरूप आपूmलाई सच्याउन तयार देखिन्न ।
जुन परिवारमा सँधै घर–झगडा भइरहन्छ, त्यो घरका बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान बिग्रेर तिनीहरू घर छोडी सडकमा पुग्दछन् । नेपालका पार्टीहरूमा त्यही हालत छ । नेताहरूको स्वार्थी झगडाले पार्टीको प्रतिष्ठा र लोकप्रियता त खस्किन्छ नै कार्यकर्ताहरूमा वितृष्णा, निराशा र पलायन पनि बढेर आउन थाल्छ । यतिसम्म हुँदा पनि पार्टीहरूमा चेत नफिर्नु र मति नसुध्रिनु झन् खेदजनक परिस्थिति हो । झगडिया नेताहरूका जिउमा सिंग–जुरो पलाउला तर बुद्धिबङ्गारो पलाउने भएन । कोतपर्वको मानसिकताले गणतन्त्र चलाउन खोज्नु नै आजको सबभन्दा दुःखद पक्ष भएको छ ।
२०७५, ३० फाल्गुन, 08:17:47 PM
कांङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
वरिष्ठ नेता पौडेल भन्छन् :- जनताको सुरक्षा खोइ ? सरकार के का लागि ?
सरकारले सीके राउतसँग गरेको सम्झौता हो कि षड्यन्त्र हो : पौडेल